Yahweh no anarana iantsoana ny Andriamanitry ny Zanak'i Israely. Fanoratra ihany koa ny hoe Yahve na Iahvé. Amin'ny Baiboly protestanta malagasy dia ahitana ny hoe Jehovah. Ny Baiboly hebreo (Tanakh) dia tsy ahitana afa-tsy ny renisoratra hebreo izay azo soratana amin'ny litera latina hoe IHWH na YHWH.
2.1 Fanononana ny teny asehon'ny renisoratra YHWH
2.1.2 Yehowah na Jehovah
2.2 Fampiasana na tsy fampiasana ny hoe YHWH
2.3 Ny anarana hoe YHWH ao amin'ny Pentateoka
3.1 Ny hevitry ny hoe YHWH araka ny Baiboly
Ny hoe Yahweh dia azo avy amin'ny fanampiana zanatsoratra (a sy e) ny renisoratra mifanarakaraka yhwh (yod - he - waw - he) izay matetika soratana amin'ny sora-baventy latina hoe YHWH. Renisoratra hebreo no nadika amin'ny litera latina hoe "y" na "Y" dia ny litera hebreo yod. Io litera io no nanjary soratana hoe "j" (vakina hoe /ʒ/ /dʒ/, na /dz/) amin'ny tenim-pirenena sasany. Ao amin'ny Baiboly hebreo dia ny litera efatra יהוה (HWHY) vakina avy ankavanana miankavia no voasoratra fa tsy misy zanatsoratra.
Fanononana ny teny asehon'ny renisoratra YHWH[hanova | hanova ny fango]
Ny fanononana ny teny asehon'ny renisoratra hebreo ao amin'ny Baiboly hebreo (na Tanakh) izay soratana amin'ny litera latina hoe YHWH dia tsy fantatra mazava.
Tao amin'ireo tempoly jiosy dia lasa fanao ny tsy manonona ny anaran'Andriamanitra mba ho fanajana azy. Nosoloana ny teny hoe Adonay izay midika hoe "Tompo" ilay anarana rehefa mamaky teny.
Ny hoe Yahweh dia fanononana nifanarahana hita ao amin'ireo Baiboly amin'ny teny grika natonta taty aoriana ka ampiasain'ireo mpikaroka momba ny Baiboly. Tsy io anefa no tena fanononana ireo litera efatra ireo. Ny zanapeo a sy o ary e dia tsy avy amin'ny teny hoe Adonay fa nifanarahana fotsiny taty aoriana sady ivelan'ny fivavahana jiosy mba hahafaha-manonona an'ilay anarana.
Yehowah na Jehovah[hanova | hanova ny fango]
Mba hampahatsiahivana ny mpamaky ny fanoloana ny Yhwh amin'ny hoe Adonay dia nasisika ny marika manambara ny zanapeo ao amin'io teny io ka nahazoana ny hoe Yahowah na Yehowah. Avy amin'io hoe Yehowah izay natao ho fampahatsiahivana ny hoe Adonay io ny hoe Jehovah hita ao amin'ny fandikana ny Baiboly sasany toy ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy. Efa tany amin'ny taonjato faha-19 no nanomboka ny tsy fampiasana ny hoe Jehovah taorian'ny fikarohana momba ny teny hebreo nataon'ilay manam-pahaizana alemàna atao hoe Wilhelm Gesenius.
Fampiasana na tsy fampiasana ny hoe YHWH[hanova | hanova ny fango]
Ny Jiosy, izay tsy mahafantatra ihany koa ny tena fanononana ilay anarana, dia tsy manonona azy. Izany dia fanajana ihany koa ny didy mifehy ny fampiasana ny anaran'Andriamanitra izay tsy azo tononina.
Ny Kristiana dia nanonona azy amin'ny endrika samihafa toy ny hoe Yahvé, Jehovah, sns. ary ireo asasoratra fikarohana dia mampiasa ny hoe Yahweh. Taty aoriana dia maro ny Baiboly kristiana izay tsy ahitana intsony na ny hoe Yahve na ny hoe Jehovah fa nanolo azy ny hoe Tompo. Ny ankamaroan'ireo Baiboly protestanta amin'ny teny frantsay dia mampiasa ny hoe l'Eternel ("ny Mandrakizay"). Ny mpandika tenin'ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao) dia nitazona ny anarana hoe Jehovah.
Nanomboka tamin'ny naha-Papa an'i Benoa XVI (taona 2005) dia tsy manonona intsony ny hoe Yahve ny Eglizy Katolika mba ho fanajana ny anaran'Andriamanitra araka ny fomba Jiosy.
Ny anarana hoe YHWH ao amin'ny Pentateoka[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny Pentateoka na Torah, izay fitambaran'ny boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly, ny anarana iantsoana an'Andriamanitra dia indraindray ny hoe Yahweh ary indraindray koa dia ny hoe Elohim. Heverin'ny mpikaroka Julius Wellhausen ho avy amin'ny loharano atao hoe Yahvista na Jahvista (hafohezina amin'ny hoe J) ireo lahatsoratra ao amin'ny Pentateoka izay manao ny anaran'Andriamanitra hoe Yahveh ireo. Izany dia anehoany fa tsy olon-tokana no nanoratra na tsy loharano tokana no nanovozana izay voasoratra ao amin'ireo boky ao amin'ny Pentateoka fa samihafa. Ny manampy an'io Loharano yahvista (J) io dia ny Loharano elohista (E) sy ny Loharano deoteronomista (D) ary ny Loharanon'ny mpisorona (P). Mifanohitra amin'ny lovantsofina izay milaza an'i Mosesy ho mpanoratra tokana ny Torah izany.
Ny hevitry ny hoe YHWH araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Ny hevitry ny anarana hoe Yahweh, Yahve na Jehovah dia notsoahana amin'izay voalaza ao amin'ny Eksodosy (Eks. 3.13-14).
Izao no navalin'Andriamanitra an'i Mosesy raha nanontany azy ny anarany izy: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehyeh Asher Ehyeh. Ny hoe YHWH izany dia avy amin'ny matoanteny hoe אֶֽהְיֶ֖ה / ehyeh. Izany dia manambara ny fisian'ny tenany amin'ny fotoana rehetra na ny fampisiany ny zavatra rehetra. Ny hoe ehyeh dia endriky ny matoanteny היה / hyh miaraka amin'ny mpisolotena voalohany hoe "aho, izaho", izay midika hoe "misy", "manjary", "mampisy" na "mampanjary". Azo ilazana ny ankehitriny sy ny ho avy io endriky ny matoanteny io.
Tsy mitovy ny fandikana amin'ny fiteny malagasy ny fehezanteny hebreo hoe אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehyeh Asher Ehyeh izay tsy ahitana afa-tsy teny telo eto. Lava dia lava izy ao amin'ny Baiboly protestanta (Ny Baiboly) sy ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao) ary ny Baiboly DIEM - fa fohy kosa izy ao amin'ny Baiboly katolika (Ny Baiboly Masina).
"Izaho no Ilay Misy" (Ny Baiboly Masina)
"Izaho no Ilay hatrizay ka ho mandrakizay" (Ny Baiboly DIEM)
"Hoporofoiko fa Izaho ilay mahavita izay iriko" (Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao)
"Izaho, Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay". (Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Yahweh&oldid=813853"
Voaova farany tamin'ny 13 Martsa 2018 amin'ny 08:58 ity pejy ity.